အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 25 Wolf က Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 25 Wolf က Tattoos ဒီဇိုင်း Idea
sonitattoo ဇူလိုင်လ 11, 2016
သင်တစ်ဦးတက်တူးနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသောကိုကြည့်ချင်ပါသလား? ကျနော်တို့ကလူအများကြီးဟာနှင်းဆီပန်းများနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်နဲ့တူရိုးရှင်းတဲ့အဆောက်အဦများသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းများဘို့အသွားမြင်ကြပြီ။ အဘယ်အရာကိုဝံပုလွေကော? တောခွေးသငျသညျကိုတှနျးလှနျနိုငျရနျမရစေခြင်းငှါတဦးတည်းထူးခြားတဲ့တက်တူးဖြစ်ပါတယ်။
ဝံပုလွေ Tattoo ဓိပ်ပာယျ
ဝံပုလွေတက်တူးထိုးလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေသူအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာနှင့်လေးစားမှု, အစွမ်းသတ္တိ, သမာဓိရှိကိုဆိုလိုသည်။ ဝံပုလွေလည်းပိုပြီးရိုင်း, မိသားစု, ပါဝါ, ဗီဇ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လွတ်လပ်မှု, ရှင်သန်မှုနှင့်စာရေးဆိုလိုနိုင်ပါ။ ။ ဆိုက်ဘေးရီးယား lore ခုနှစ်, #wolf သားသမီးများ၏အပြစ်ကင်းစင်ကာကွယ်ပေးရန်အပေါ်သို့ဟုခေါ်သည် - အထူးသဖြင့်ကျန်းကျန်းမာမာကလေးမွေးဖွားအာမခံထားဖို့မဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းကို Eurasia ခုနှစ်, ဝံပုလွေလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦးကာကွယ်ခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဝံပုလွေပြောသည်လျှင်ရသည်မှာ, သင်ဝံပုလွေအစဉ်အမြဲသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုကာကွယ်ရန်မယ်လို့စဉ်ကတင်ဆောင်လာသောများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်သောကြောင့်ဝံပုလွေ #tattoo အဘို့အသွားသူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှုကအုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်ပြသရန်ချစ်သူများမှင်ဒီတက်တူး။ တောခွေးကွယ်လွန်သွားကြပါပြီသူမြား၏ကာကွယ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ဒါကသူတို့မကြာခဏသင်္ချိုင်းသို့မဟုတ်ဂူပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
ဝံပုလွေတက်တူးထိုးကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်, သူတို့သည်လည်းအရာတွေအများကြီးကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဤအတက်တူး၏မူကွဲသူတို့ကိုထူးခြားသောစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ကကိုယ်စားပြု
brute အစွမ်းသတ္တိ, ပါဝါ, Dominic, အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson နှင့် Nobility, အန္တရာယ်နှင့်အဗဒ္ဒုန်, စွမ်းအင်, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်, စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်။ ဤလူမျိုးကိုအများကြီးထိုသို့အသုံးပြုခြင်းကိုလုပ်နေပါတယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
1 ။ ယောက်ျားလေးများများအတွက်အံ့သြဖွယ်များနှင့်အေးမြဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်စိတ်ကူး
2 ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ယောက်ျားတွေအပေါ်ဝံပုလွေခေါင်းကိုတက်တူးစိတ်ကူးဖြတ်
3 ။ လက်ရုံးပေါ်လနှင့်အပြည့်အဝဝံပုလွေတက်တူးစိတ်ကူးအောက်မှာဝံပုလွေ
4 ။ ဦးခေါင်းခွံနှင့်လက်ပေါ်လူတို့သညျအဘို့ရန်လိုဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်း
5 ။ မက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်၏ဘေးထွက်
ဝံပုလွေတက်တူးထိုးကျူးကျော်, စွမ်းအင်နှင့်အာဏာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသော #design နှင့်အရောင်လာသည်။
6 ။ လူတို့သညျအဘို့ကို Creative စွပ်အိတ်ဝံပုလွေတက်တူးစိတ်ကူး
သငျသညျအထဲကရှိပါသည်သောများစွာသောဒီဇိုင်းများထဲမှရှေးခယျြဖို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ တကိုယ်လုံးအစိတ်အပိုင်းများဟာတက်တူးထိုးဒီဇိုင်း fit နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကလူအများကြီးကဒီတက်တူးထိုးကောက်နှင့်သူတို့၏အလောင်းများကိုအပေါ်အံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုကြောင့်အသွင်ပြောင်းမြင်ကြပြီ။
7 ။ မိန်းမတို့အဘို့ချစ်စရာဝံပုလွေပေါင်တက်တူးစိတ်ကူး
သင်ကအလွန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လုပ်နေကြပါလျှင်တစ်ဦးတက်တူးထိုး inking စတင်ပထမနေရာသေးငယ်တဲ့ဗားရှင်းနဲ့အတူစတင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
8 ။ လက်နက်အပေါ်မိန်းကလေးတွေအဘို့မီးဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်း Blaring
9 ။ ယောက်ျားလေးများအဘို့အရောင်စုံလက်ဝံပုလွေတက်တူးမင်
10 ။ ပခုံးပေါ်ယောက်ျားလေးများများအတွက်အံ့သြဖွယ်ဝံပုလွေတက်တူးထိုး #idea
11 ။ အမြိုးသမီးမြားအဘို့အရောင်စုံဝံပုလွေတက်တူးမင်အိတ်
12 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အပြည့်အဝလက်ဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်း
အွန်လိုင်းသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုတက်တူးထိုးဒီဇိုင်းများအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့တက်တူးထိုးကြည့်ချင်သလဲဆိုတာပေါ် မူတည်. မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီကိုယူနိုငျသညျ။ သင်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီသောအခါ, သငျသညျလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့မတိုင်မီမေးခွန်းများမေးကြောင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
13 ။ လူတို့သညျအဘို့အ Wolf ကတက်တူးထိုးလက်မောင်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ကမ်ဘာပျေါတှငျဝံပုလွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဤအတောခွေး၏တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုကြောင့်တက်တူးထိုးမှကြွလာသောအခါမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မက်ဆေ့ခ်ျများရှိသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
14 ။ အဆိုပါအင်္ကျီလက်ပေါ်လူတို့သညျအဘို့လူ့ခြင်းနှင့်ဝံပုလွေတက်တူးမင်
တစ်ဦးတက်တူးအဖြစ်ဤသားရဲတကောင်ရွေးချယ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီအခါ, သငျသညျအနားယူနှင့်သင့်ထံမှရွေးချယ်ရာတွင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဝံပုလွေတက်တူးထိုးအမျိုးအစားအပေါ်တစ်ဦးသုတေသနလုပ်ငန်းယူသင့်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
15 ။ သစ်တောနှင့်အင်္ကျီလက်ပေါ်ယောက်ျားလေးများအဘို့အဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာစိတ်ကူး
ဝံပုလွေလေးစားကြောက်နေကြသည်။ ဝံပုလွေတက်တူးထိုးသစ္စာရှိမှု, ရဲစွမ်းသတ္တိကြောင့်တစ်ကွမျးကွုတိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပေမယ့်လေးစားဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းအရည်အသွေးတွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
16 ။ မိန်းကလေးတွေပေါင်ပေါ် sexy ပန်းပွင့်နှင့်ဝံပုလွေတက်တူးမင်
ဤအတောခွေး '' တက်တူးအတူပါလာသည်ဟုကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားနှင့်ပုံစံမျိုးစုံရှိပါတယ်။ သငျသညျအံ့သြဖွယ်အသေးတက်တူးလာပြီစဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောသောလက်ချောင်းကိုတက်တူးထိုးဘို့အသွားရန်ရှိသည်လိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
17 ။ ယောက်ျားအင်္ကျီလက်အဘို့အ Wolf ကတက်တူးထိုးလက်မောင်းဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
ဒါဟာစာလုံးများသို့မဟုတ်ရေးဆွဲ၏ form မှာရှိနိုင်ပါသည်။ အနုပညာရှင်ထိပ်ပေါ်မှာသို့မဟုတ်ပင်သင်၏လက်ချောင်းများ၏နှစ်ဖက်မှာဆွဲနိုင်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
18 ။ မိန်းကလေးများအဘို့အင်္ကျီလက်ဝံပုလွေတက်တူးမင်စိတ်ကူး
သင်ကသင့်ရဲ့ဝံပုလွေတက်တူးထိုးရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါတစ်ဦးဖန်တီးမှုလူတစ်ဦးဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အရွယ်အစားစိတ်ပူဖြစ်မနေပါနဲ့။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
19 ။ မိန်းမတို့အဘို့အစာအိမ်ဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်း
သင်ဝံပုလွေသင့်ရဲ့အရေပြားပေါ်တွင်ဖြစ်ချင်သလဲဆိုတာကြီးမားသောဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ္မာသောအနုပညာရှင်၏အကူအညီဖြင့်သင်သည်သင်၏အသားအရေပေါ်မှာချစ်စရာကောင်းတဲ့တက်တူးထိုးရဖို့သေချာပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
20 ။ လူတို့သညျအဘို့ထင်းရှူးနှင့်ဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်းကိုမှင်
ကျနော်တို့က New Moon သရုပျဖျောသော Wolf က Tattoo ရှိသည်။ ကျနော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Twilight တီဗီစီးရီး၏ဤပိုမြင်နေရသည်။ ပြပွဲ၏အချို့ပရိတ်သတ်များက၏အသုံးချနေနေကြသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
21 ။ မိန်းကလေးများအဘို့ကို Creative ပေါင်ဝံပုလွေတက်တူးဒီဇိုင်းစိတ်ကူး
အဆိုပါပုံဆွဲသင့်ရဲ့အနုပညာရှင်နှင့်သင်မည်သို့ပြုလုပ်တူချင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကကြောက်မက်ဘွယ်သောရှာဖွေနေသည်မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးကိုအသုံးပြုနေသောလူမျိုးစုဝံပုလွေတက်တူးထိုးရှိပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
22 ။ လက်နက်အပေါ်မိန်းမတို့အဘို့သံလိုက်အိမ်မြှောင်နဲ့ဝံပုလွေတက်တူးမင်
ဒါကကျွန်တော်ဝံပုလွေကွဲပြားခြားနားသောမျိုးစိတ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်တက်တူးလွယ်ကူစွာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေသူတို့ကိုခွဲခြားနိုင်သည်ကိုဆိုသညျကားအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကြည့်ဖို့ရှားပါးကြောင်းဆဲလ်တစ်ပုံစံရှိပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
23 ။ နောက်ကျောအပေါ်စူပါအံ့သြဖွယ်ဝံပုလွေတက်တူးမင်စိတ်ကူး
ထိုအခါသင်သိဝံပုလွေအမျိုးအစားတိုင်းကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသောဝံပုလွေ။ သငျသညျမှင်ဤဝံပုလွေတက်တူး၏ဘယ်လိုသလဲ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
24 ။ လက်ရုံးပေါ်ဝံပုလွေတက်တူးစိတ်ကူး Metamorphosing
25 ။ ခေါင်းပေါ်မှာယောက်ျားအဘို့အ Wolf ကတက်တူးထိုးစိတ်ကူး
သင်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေကိုရွေးချယ်ကြောင်းဝံပုလွေတက်တူးထိုးမရှိအမျိုးအစားရှိပါသည်။ သင်ကသင့်ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုပြသမှကြွလာသောအခါသင်တို့ကိုကွဲပြားခြားနားစေရန်သင့်ရဲ့ဝံပုလွေအပေါ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအရောင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ခြင်္သေ့သည်တက်တူးဂီတတက်တူးကငျးမွီးကောတက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးကြောင်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးဟင်္တက်တူးပန်းချီတက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများလတက်တူးနေရောင်တက်တူးrip တက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးရေဘဝဲတက်တူးခြေလျင်တက်တူးနှလုံး Tattoosစိန်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးအစ်မတက်တူးဆင်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးချစ်စရာတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းချယ်ရီပွင့်တက်တူးKoi ငါးတက်တူးငှက်တက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးကျောက်ဆူးတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးစုံတွဲတက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးလက်တက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးခြေကျင်း Tattoosလိပ်ပြာတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးတက်တူးထသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးမြှားတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးမျက်စိတက်တူးလက်တက်တူးFeather Tattoo